Degmada Baardheere oo saaka laga qaxayo, ka dib duqeyn shalay ka dhacday. – Radio Daljir
Baardheere, Dec, 11 – Wararka saaka ka imaanaya magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in boqolaal qoys ay ka qaxayaan xaafado ka mid ah magaalada, halkaas oo shalay duqeyn dhinaca cirka ah ka geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya sida ay Radio Daljir u sheegeen dad goobjoogeyaal ah.
Dadka saaka qaxaya ayaa la sheegayaa in intooda badan ay ka imaanayaan xaafadihii ay shalay duqeyntu ka dhacday oo magaalada ka baxsan ayna ku soo qul-qulayaan gudaha magaalada si ay dadkooda wax ula qabaan. Laakiin mas’uuliyiinta Shabaabka ee magaaladaasi gacanta ku haya ayaa dadka ku boorriyey inay goobahooda ku sugnaadaan ayna mujaahidiin yihiin haddii ay duqayntaasi ku dhintaan.
Weerarka dhinaca cirka ay shalay magaaladaasi ku qaadeen ciidamada Kenya ayaa la sheegay in bartilmaamedkiisu ahaa goobo ay dagganyihiin ururka Al-shabaab oo magaaladaasi ku yaalla, balse diyaaradaha ayaa gantaallo la dhacay goobo dadka lagu quudiyo oo ay maamusho hay’adda bisha-cas ee Soomaaliyeed iyo goob waxbarasho halkaas oo la sheegayo inuu ku dhaawacmay hal qof.
Cabsida ugu weyn ayaa dadka ku dhalatay ka dib markii xalay la arkay diyaarado joog hoose ku duulaya oo dul heehaabaya magaaladaasi, waxaana uu weerarkii shalay noqonayaa kii labaad ee dhinaca cirki ee lagu qaado magaalaasi muddo ka yar 3 beri. mano jiro ilaa iyo hadda war arrintaasi la xiriira oo kasoo baxay dawladda Kenya.